မိုဘိုင်းဟန်းဆက် ခိုးယူခံရမှု .. Power Mobile Centre (video)
မိုဘိုင်းဟန်းဆက် ခိုးယူခံရမှု (သူခိုးများ) အန္တရာယ်မှ ကာကွယ်နိုင်ရန်
20.9.2013 ရက် နေ့လည် ၁း၅၄ နာရီခန့်၌ Power Mobile တွင် မိုဘိုင်းဟန်းဆက် (၁)လုံး ခိုးယူခံခဲ့ရပါသည်။
သို့ဖြစ်ပါ၍ တခြားသော မိုဘိုင်းဖုန်းဆိုင်များနှင့် အများပြည်သူများ သိရှိကာကွယ်နိုင်ရန် CCTV Video File နှင့်တကွ တင်ပြလိုက်ပါသည်။
Model = Huawei P6 (Black)
IMEI = 860505029383707
S/N = E2N7NB9381602586
အဆိုပါ ဖုန်း Model အမျိုးအစား ၊ IMEI & S/N နံပါတ်တို့ဖြင့် ရောင်းဝယ်ခြင်း ၊ Services (ပြုပြင်ခြင်း)များ တစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်ခြင်းကို တွေ့ရှိပါက Power Mobile ဖုန်းဆိုင်သို့ ဆက်သွယ်အကြောင်းကြားပေးပါရန် လေးစားစွာဖြင့် အကူအညီတောင်းခံအပ်ပါသည်။
* လမ်း (၃၀) " Power Mobile Centre " ၊ ၇၂ x ၇၃ ကြား ၊ မန္တလေး။
ဖုန်း 09 - 433 10000
* (၈၄) လမ်း " Power Mobile Centre " ၊ ၄၀ x ၄၁ ကြား ၊ မန္တလေး။
ဖုန်း 09 - 433 20000
* (၃၅) လမ်း " Power Mobile Centre " ၊ ၇၄ x ၇၅ ကြား ၊ မန္တလေး။
ဖုန်း 09 - 433 30000
* (၆၂) လမ်း " Power Mobile Centre " ၊ မနော်ဟရီလမ်း ၊ ၆၁ x ၆၂ ကြား ၊ မန္တလေး။
ဖုန်း 09 - 433 40000
* (၁၂) လမ်း " Power Mobile Centre " ၊ ၈၀ x ၈၁ ကြား ၊ မန္တလေး။
ဖုန်း 09 - 680 3285
* (၂၂) လမ်း " Power Mobile Centre " ၊ ၂၂ လမ်း x ၈၈ လမ်းထောင့် ၊ မန္တလေး။
ဖုန်း 09 - 433 50000
* (၅၈) လမ်း " Power Mobile Centre " ၊ ၅၈ လမ်း x အောင်ဆန်းလမ်းထောင့် ၊ မန္တလေး။
ဖုန်း 09 - 33333 258
From > Myanmar Mobile User Group
၁။ ကန်စွန်းဥစားပါ ကန်စွန်းဥမှာ ညဘက် အမြင် အာရုံ အားကောင်းစေတဲ့ ဗီတာမင်အေ များစွာ ပါဝင်ပြီး မုန်လာဥ (Beetroot)မှ ပါဝင်တဲ့ Anthocyanin တွေဟာ မျက်စိမှ သွေးကြော ငယ်တွေ သွေးယို စိမ့်မှု မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင်တဲ့ အတွက် Retinopathy (မျက်စိ မမြင်ရတဲ့ အကြောင်းရင်း တစ်ခု) မဖြစ်အောင်လည်း ကာကွယ် ပေးနိုင်ပါတယ်။
၂။ ကွန်ပျူတာ ကြည့်တာ လျှော့ပါ။ အခန်း အပူချိန် လျှော့ထားပါ အသင့်မျက်လုံးနဲ့ လေထုကို ခြောက်သွေ့ စေနိုင်လို့ပါ။ ပတ်ဝန်းကျင် စွတ်စိုမှုရှိအောင် သစ်ပင် အနည်းငယ် စိုက်ထားပေးပါ။
၃။ ပုံမှန်လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ပါ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာကြောင့် မျက်စိအတွင်း ဖိအားတွေ လျှော့ချနိုင်ပြီး အတွင်းတိမ် မဖြစ်အောင် ကာကွယ် ပေးနိုင် ပါတယ်။ လေ့လာမှု တစ်ခုအရ တစ်ကြိမ်ကို မိနစ် ၄၀ ခန့်၊ တစ်ပတ်ကို လေးကြိမ် လမ်းလျှောက်တဲ့ လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်သူတွေဟာ ရေတိမ် ဖြစ်နိုင်ခြေကို အများကြီး လျှော့ချ နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။
၄။ နံနက်စာ အတွက် ဘလူးဘယ်ရီစားပါ ဓာတ်တိုး ဆန့်ကျင်ပစ္စည်း ပါဝင်မှုများတဲ့ ဘလူးဘယ်ရီသီးကို နံနက်စာအဖြစ် စားသုံးပေးပါက အသက် ၅၀ ကျော်ရင် ဖြစ်တတ်တဲ့ အသက်အရွယ်နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ မျက်စိအမြင်အာရုံ ဆုံးရှုံးမှု (AMD) မဖြစ်အောင် ကာကွယ်နိုင် ပါတယ်။ ကျန်းမာရေးကို မြှင့်တင်နိုင်ဖို့ ဒိန်ချဉ်နဲ့ အတူ တွဲစားပါ။
၅။ မွှေးရနံ့ ရှူပါ စံပယ်ပန်း ရနံ့ပါဝင်တဲ့ ရနံ့ဆီကို ပခုံးမှာ ဆွတ်ထားပြီး ရှူပေးပါ။ ဦးနှောက်အတွင်း ဘီတာလှိုင်း တွေ ပိုများလာပြီး ပိုမိုတက်ကြွမှု ရှိလာနိုင်တဲ့အတွက် အာရုံ စူးစိုက်မှုလည်း ပိုကောင်း လာပါတယ်။
လေယာဉ်ရဲ့  GPS တင်မကပဲ ဂြိုလ်တုဆက်သွယ်ရေးနစ်၊ မြေပြင် ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းအားလုံးမှာ ဆဲလ်ဖုန်းရဲ့  Wave တွေရောနှောနေမျာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီတော့ လိုချင်တဲ့ သတင်းအချက် အလက်ကို မှန်မှန်ကန်ကန် မရရှိတော့ပဲ လေယာဉ်တိမ်းမှောက်တဲ့အထိ ဖြစ်စေပါတယ်။
မော်ဒန်ခေတ်နှင့် လေယာဉ်ပေါ် ဆက်သွယ်ရေး
အခုတော့ ခေတ်မှီသွားပါပြီ။ နိုင်ငံကြီးက လေယာဉ်တွေမှာ သီးသန့် ဂြိုလ်တုဖုန်း ခွဲထားပေးတာတော့ အမေရိကန်မှာဆို ၁၀ နှစ်မကတော့ပါဘူး။ လေယာဉ်ပေါ်ကနေ အင်တာနက်သုံးလို့ရအောင်တောင် ဖန်တီးပေးပါတယ်။ ဒါက လေယာဉ်နဲ့ မြေပြင်က ဆက်သွယ်ရေး တာဝါတိုင်များနဲ့ ဆက်စပ်မှု မရှိအောင်လည်း ဖန်တီးထားပါတယ်။ ယခုဆို ကိုယ့်ဖုန်းကို လေယာဉ်ပေါ်မှာ အသုံးပြုလို့ရတဲ့အထိ ဆားဗစ်ပေးတဲ့ လေယာဉ်လိုင်းနဲ့ ကုမ္မဏီများ ရှိလာပြီ ဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
အမေရိကန်ကာကွယ်ရေးဌာနဝန်ထမ်းအများစုအား လုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်ရန် အကြောင်းကြား
ယင်းသို့ အကြောင်းကြား ရန် ဆုံးဖြတ်ရခြင်းမှာ Pay Our Military Act ဥပဒေဖွင့်ဆိုချက် အရဖြစ်ကြောင်း ကာကွယ်ရေး ဝန်ကြီးချပ်ဟေဂယ်က ပြောကြား ခဲ့သည်။ ရီပတ်ဘလီကင်နှင့် ဒီမို ကရက်များအကြား ဘတ်ဂျက် အငြင်းပွားမှုကြောင့် ဖက်ဒရယ် အစိုး၏ ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း များ ရပ်ဆိုင်းထားသည်မှာ ငါး ရက်ကြာမြင့်နေပြီဖြစ်သည်။ သို့ သော်လည်း လစာမပေးဘဲ အိမ် ပြန်လွှတ်ခဲ့သော ဖက်ဒရယ်အစိုးရ ဝန်ထမ်း ၈၀၀၀၀၀ ကို လစာပြန် ပေးရေးနှစ်ဖက်စလုံးက မဲပေး အတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်သည်။
နှစ်ပါတီပူးပေါင်းဆောင် ရွက်မှု၏ ရှားပါးသောအခိုက် အတန့်ကာလတွင် စနေနေ့က အောက်လွှတ်တော်ကိုယ်စား လှယ်များသည် အစိုးရယန္တရား ရပ်ဆိုင်းမှုအဆုံးသတ်သည်နှင့် ဗဟိုအစိုးရဝန်ထမ်းများသို့ လ စာပေးမည့်ဥပဒေတစ်ခုကို ၄၀ရ မဲ-ဝမဲ ဖြင့် အတည်ပြုခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ဖက်ဒရယ်ဘတ် ဂျက်ကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍သဘော တူညီမှုတစ်စုံတစ်ရာရရှိမည့် လက္ခ ဏာမပေါ်သေးပေ။
အောက်လွှတ်တော်ကို ထိန်းချုပ်ထားသော ရီပတ်ဘလီ ကင်တို့က ဘတ်ဂျက်ကို အတည် ပြုရန်ငြင်းဆိုထားပြီး သမ္မတ ဘားရက်အိုဘားမား၏ ကျန်းမာ ရေးစောင့်ရှောက်မှုပြုပြင်ပြောင်း လဲရေးဥပဒေနှောင့်နှေး သို့မဟုတ် ငွေကြေးထောက်ပံ့မှုကို ခွာချွတ် ယူနေပါက ယခုကဲ့သို့ ငြင်းပယ် မည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့ သည်။
အစိုးရယန္တရားရပ်ဆိုင်းပြီး မကြာမီ The Pay Our Military Act ဥပဒေကို ကွန်ဂရက်က အ တည်ပြုခဲ့သည်။ အစိုးရယန္တရား ရပ်သွားမှုကြာသည်နှင့် အမေ ရိကန်အား နိုင်ငံတကာအတိုင်း အတာအရ ထိခိုက်နိုင်ကြောင်း နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဂျွန်ကယ် ရီက သတိပေးခဲ့သည်။ မစ္စတာ အိုဘားမားက ယန္တရားရပ်ဆိုင်း မှုကြောင့် အာရှခရီးစဉ်ကို ဖျက် သိမ်းလိုက်ရကြောင်း သိရသည်။
အမျိုးသမီးများအတွက် အမေရိကန် LEEP နည်းပညာဖြင့် သားအိမ်ခေါင်းရောဂါ ခွဲစိတ်ကုသနည်း
၂။ သားအိမ်ခေါင်းပုပ်သိုးဆွေးမြှေ့ ခြင်း။
၅။ သားအိမ်ခေါင်းပွခြင်း စသော သားအ်ိမ်ခေါင်းရောဂါရှိသူများအတွက် ထိုနည်းပညာဖြင့်ကုသလျှင် ပို၍ထိရောက်သည်။
၁။ ခွဲစိတ်ချိန်တိုပြီး ခွဲစိတ်ပြီးနောက်တွင်သားအိမ်ခေါင်းမှာ မူလအတိုင်းပြောင်ချောနေပါမည်။
၂။ ပုံမှန်အစိတ်အပိုင်းနှင့် မွေးဖွားသည့်စွမ်းအားကို မထိခိုက်နိုင်ပါ။
၃။ အန္တရာယ်ကင်းပြီး နောက်ဆက်တွဲ ဆိုးကျိုးမရှိခြင်းနှင့် တစ်ကြိမ်တည်း အမြစ်ပြတ် ကုသပေးပါသည်။
၄။ ချက်ချင်းကု၍ချက်ချင်း သွားလာနိုင်ပြီး ဆေးရုံတက်ရန်မလိုအပ်ပါ။
၅။ အချိန်ကုန်သက်သာစေပြီး ဈေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ကုသပေးနေပါသည်။
ကိုးရီးယားစတိုင်လ် အမျိုးသမီးအဂါင်္ အသေးစားခွဲစိတ်ကုသနည်း
၂။ မွေးဖွားပြီးနောက် မိန်းမကိုယ်အင်္ဂါ ကွဲအက်ခြင်း
၃။ အပျိုအမြှေးပါးဖာထေးခြင်း စသည်တို့ ကိုခွဲစိတ်ကုသပေးနေပါသည်။
၁။ အမာရွတ်မရှိခြင်း ၊ နာကျင်မှုလျှော့နည်းခြင်း နှင့် ပိုးမွှားကူးစက်မှု မရှိခြင်း
၂။ ခွဲစိတ်ပြီးနောက် မူလအတိုင်း လှပပြီး ကိုယ့် ကိုကိုယ် ယုံကြည်မှု ပြန်လည်ရရှိနိုင်ခြင်း
အထက်ပါရောဂါများနှင့်ပါတ်သတ်၍ အသေးစိတ်သိရှိလို ပါက ရန်ကုန်မြို့ မှာရှိသော ရွှေပိတောက် ရန်ကုန်ဆေးရုံ ကို ဆက်သွယ်နိုင်ပါကြောင်း
အရက်စိမ်ထားတဲ့မြွေ အသက်ပြန်ရှင်လာတယ်ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်း
အရက်စိမ်ထားတဲ့မြွေက အသက်ပြန်ရှင်ပြီး လူကို ကိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်း သောကြာနေ့က ဧရာဝတီဘလော့မှာ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဘာကြောင့် အသက်ပြန်ရှင်လာတာလဲ။ အရက်ကြောင့်လား။
(အင်တာနက်မှာ ရှာလိုက်ရင် မြွေထည့်ထားတဲ့အရက်ပုလင်းများစွာကို တွေ့ရမှာပါ)
ဗြိတိန်က လာတဲ့ အွန်လိုင်းသတင်းတပုဒ်မှာရေးထားချက်အရ ဆိုရင် ဒီမြွေက ပြန်ရှင်လာတာ မဟုတ်ဘဲ နဂိုကတည်းက မသေသေးတာလို့ သဘောပေါက်ရပါတယ်။
မြွေဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါမျိုးက ခွေပြီးတော့ ကာလအတန်ကြာ အိပ်နေတတ်တယ်၊ အသက်ရှင်နေတတ်တယ်၊ သို့သော်လည်း အောက်စီဂျင်တော့ လုံလုံလောက်လောက် ရှိရမယ်၊
ဖြစ်နိုင်တာက အရက်ပုလင်းကို လုံအောင် ပိတ်မထားမိတာမျိုးပါ။
ဒါက တရုတ်ပြည် Heilongjiang ပြည်နယ် Shuangcheng မြို့မှာ ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
တရုတ်ပြည်မှာ အရက်ပုလင်းထဲ မြွေစိမ်ပြီး အဲဒီအရက်ကို ကျန်းမာရေးအတွက် သောက်သုံးလေ့ရှိပါတယ်။
အခုတော့ အဲဒီအရက်က အစွမ်းမပြခင်မှာ မြွေကိုက်လို့ ဆေးရုံရောက်ခဲ့ရပါတယ်လို့ သူက ပြောဆိုကြောင်းကိုလည်း သတင်းမှာ ဟာသနှောထားပါတယ်။
ဒီအမျိုးသမီးက ဆေးရုံမှာ ကုသမှုခံယူပြီး ဆေးရုံဆင်းသွားပါတယ် တဲ့။ ကံကောင်းထောက်မစွာပဲ လို့ ဆိုရပါမယ်။
ကံမကောင်းတာကတော့ အဲဒီ မြွေ ဖြစ်ပါတယ်။
မြွေကို သတ်လိုက်ကြတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
http://metro.co.uk/2013/10/05/snake-bites-woman-after-three-months-trapped-in-a-jar-in-china-4135205/ မှာ ဖော်ပြထားတဲ့ သတင်းကို ကိုးကားပါတယ်။
ဆက်စပ် >>> ၃ လကျော်အကြာ ပုလင်းထဲ အရက်စိမ်ထားတဲ့ မြွေက လူကို ကိုက်
ထမင်းရည်က မိန်းကလေးတွေရဲ့ အလှအပ လျှိုဝှက်ချက်လား ထမင်းချက်တဲ့အခါ ထမင်းပေါင်းအိုး တွေနဲ့သာ ချက်ကြတော့တဲ့ အခုခေတ်မှာ ထမင်းရည် လို့မေးလိုက်ရင် တော်တော်ရှာရမယ် ထင်ပါတယ်။ ထမင်းရည် ဟာဆန်ကို ချက်တဲ့အခါ ရေနည်းနည်း ပိုထည့်လို့ ထမင်းကျက်ပြီး တဲ့နောက် ထမင်းပေါ်မှာ ကျန်နေတဲ့ အရည်ကြည်လေးကို ခေါ်တာပါ။ ဒီလို ထမင်းရည် ရှားနေတဲ့အချိန်မှာ ထမင်းရည်က မိန်းကလေးတွေရဲ့ အလှအပကို အတော်လေး ကူညီနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ အကျိုးကျေးဇူးလေးတွေ တွေ့လာတာကြောင့် အသုံးဝင်ပုံကို တင်ပြလိုက်ရပါတယ်။
မီတာခ တစ်ပြားတစ်ချပ်မျှ ကုန်ကျစရာ မရှိသည့် ခေတ်မီ ဒီဇိုင်းသစ် နေအိမ်တစ်မျိုးကို ဗြိတိန်တွင် စတင်၍ အရောင်းစာရင်း တင်လိုက်ပြီ ဖြစ်သည်။ ယင်းအိမ်ကို ဝယ်ယူမည့်သူ အနေဖြင့် စွမ်းအင် အသုံးပြုရန် မည်သည့် မီတာခမျှ ပေးဆောင်စရာ မလိုသော်လည်း နေအိမ်ကို ပိုင်ဆိုင်ရန်မူ စတာလင်ပေါင် (၁.၂)သန်းထိ အသုံးပြုရမည် ဖြစ်သည်။ စွမ်းအင်ကဏ္ဍအတွက် နေစွမ်းအင်ကိုသာ လုံးဝဥဿုံ မှီခိုထားသည့် ယင်းနေအိမ်သည် လီဆက်စတာရှိုင်းယား အရပ်တွင် တည်ရှိသည်။ (၂)ဧက ကျယ်ဝန်းသော မြေပြင်တွင် ဆောက်လုပ်ထားသော နေအိမ်သည် သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ကိုက်ညီပြီး ထင်းရှူးသားဖြင့် အဓိက အသုံးပြုထားသည်။
နေအိမ်အထက် ခေါင်မိုးပေါ်တွင် နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်နှင့် အပူဓာတ်တို့ကို စုပ်ယူမှုအား အလွန်ကောင်းမွန်သည့် ခေတ်မီ နည်းပညာသုံး ဆိုလာပြားများ တပ်ဆင်ထားသည်။ အပူစွမ်းအင်သည် နေအိမ်၏ ရေပူစနစ်နှင့် အိမ်အောက်ခြေရှိ အနွေးပေး ပိုက်လိုင်းများကို သက်ရောက်စေမည် ဖြစ်သည်။ ကာဘွန်ဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လွှင့်မှု လုံးဝ ကင်းရှင်းသည့် နေအိမ်တွင် ကြီးမားကျယ်ပြန့်သည့် မှန်ပြူတင်းပေါက်ကြီးများ တပ်ဆင်ပေးထားပြီး မိုးရေ စုဆောင်းနိုင်သည့် ရေလှောင်ကန်လည်း ပါဝင်နေကြောင်း သိရှိရသည်။
ယင်းနေအိမ်တွင် နေထိုင်သူ အနေဖြင့် စွမ်းအင်အတွက် လျှပ်စစ်မီး သွယ်တန်းရန်ဖြစ်စေ၊ ဓာတ်ငွေ့ပိုက် သွယ်တန်းရန်ဖြစ်စေ လုံးဝမလိုအပ်ဟု ဆိုသည်။ နေအိမ်အတွက် အောက်ခံ ဖောင်ဒေးရှင်း ချစဉ်ကတည်းက မြှုပ်နှံထားသည့် အနွေးပေး ပိုက်များသည် နွေရာသီ တစ်လျှောက်လုံး စုဆောင်းထားသည့် အပူဓာတ်ကို ဆောင်းရာသီတွင် ပြန်လည် ထုတ်ပေးကာ နေအိမ်ကို နွေးထွေးနေစေမည်ဟု ဆိုသည်။ အိပ်ခန်း(၅)ခန်း ပါဝင်သော အဆိုပါ နေအိမ်ကို Caplin Homes ကုမ္ပဏီက တည်ဆောက်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကုမ္ပဏီ၏ ဒါရိုက်တာ မိုက်ကယ် ဂေါ့ဒတ်က "ဒီနေအိမ်သစ်ရဲ့ တည်ဆောက်မှုနဲ့ ဒီဇိုင်းဖန်တီးမှု အားလုံးက ကာဘွန်ထုတ်လွှတ်မှုကို လျှော့ချနိုင်ဖို့ အဓိက ရည်ရွယ်ထားတာပါ"ဟု ဆိုသည်။ ဗြိတိန် အစိုးရသည် (၂၀၁၆)ခုနှစ်တွင် ဆောက်လုပ်မည့် နေအိမ်သစ် အားလုံးတွင် ကာဘွန်ထုတ်လွှတ်မှု လုံးဝမရှိရေး ဦးတည် လုပ်ဆောင်နေသည်။ ဂေါ့ဒတ်က နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်သုံး နေအိမ်တွေဟာ ဆောက်လုပ်မှု ကဏ္ဍမှာ ရွေးချယ်သင့်တဲ့ ဖန်တီးမှု တစ်ရပ်ပါ။ လတ်တလောမှာ အကန့်အသတ်တချို့ ရှိသေးပေမယ့် အနာဂတ်မှာ အရွယ်အစား အမျိုးမျိုး နေအိမ်တွေအတွက် ကျွန်တော်တို့ အစီအစဉ်တွေ ရေးဆွဲနေပါတယ်"ဟုလည်း ပြောကြားသွားသည်။
ယခုနေအိမ်တွင် ပြူတင်းပေါက် ဒီဇိုင်းများကအစ စွမ်းအင်သုံးစွဲမှု ရှုထောင့်မှ ချဉ်းကပ် တပ်ဆင်ထားသည်။ နေရောင်ခြည် စွမ်းအင်သုံး နေအိမ်များသည် မြေအောက် အနွေးပေး စနစ်ကို တစ်နှစ်တာလုံး အသုံးပြုနိုင်ရန် သီတင်း(၁၀)ပတ်စာမျှ စုဆောင်းထားသည့် နေပူရှိန်ဖြင့် လုံလောက်မည် ဖြစ်သည်။ ထို့အပြင် အဆောက်အအုံ အတွင်းအပြင် အပူချိန်ကို ခြေရာခံ စောင့်ကြည့်သည့် စနစ်များကိုပါ တပ်ဆင်ပေးထားကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
အဆိုပါ သေဆုံးမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး သေဆုံးသူ၏ ညီမဖြစ်သူ မတင်တင်ဝင်းမှ ပြည်သတင်းသို့ ပြောကြားခဲ့သည်မှာ ...
ကိုချင်းလေးသည် 2.10.2013 ရက်နေ့ ည9နာရီ 30 မိနစ် အချိန်ခန့်တွင် ဆိုင်ကယ် ကယ်ရီလိုက်သွားသည်ဟု သိရှိရပြီး ည 11 နာရီ 30 အချိန်ခန့်တွင် P.T.U ကျောင်းနှင့် ဇာတ်ငါးရာကြားရှိ ပိုရွာသို့ သွားသောလမ်းမပေါ် ခရီးတ၀က်ခန့်တွင်ရှိသော ဇရပ်၏အနီး ၀ါးနှစ်ပြန်ခန့်အကွာတွင် သေဆုံးသူ၏ အလောင်းကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ ထို့အပြင် သေဆုံးသူနှင့်အတူ လည်းကောင်းပိုင်ဆိုင်သော ဆိုင်ကယ်၊ လက်ကိုင်ဖုန်းတို့ကိုလည်းတွေ့ရှိရပြီး ထူးခြားသည်မှာ ဖိနပ်စီးလျှက်အနေအထားနှင့် အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင် သွေးကွက်မရှိခြင်း၊ လုံးထွေးသတ်ပုတ်ထားသည့် အသွင်အပြင်မရှိခြင်း၊ ဆိုင်ကယ်ဦးတည်ရာမှာ လမ်းမကြီးဘက်သို့ ဦးတည်ထားခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ ကိုတင်ရှိန် (ခ) ကိုချင်းလေး အသတ်ခံရမှုအား ပေါင်းတလည် ရဲစခန်းမှ စခန်းမှုး ဦးနိုင်ဝင်း ဦးဆောင်ပြီး ဒုရဲအုပ် ဦးကျော်ဇင်ထိုက်တို့မှ အမှုမှန် အမြန်ဆုံးပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် အမှုဖွင့်ဆောင်ရွက်လျှက် ရှိကြောင်း သေဆုံးသူ၏ ညီမဖြစ်သူ မတင်တင်ငွေမှ ပြည်သတင်း သို့ ပြောကြားသွားပါသည်။
ပြီးခဲ့တဲ့ ရက်ပိုင်းလေးတင် Nexus-5 နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်း ပေါက်ကြားခဲ့လို့
အပြီး ယခုထပ်မံ ထွက်ပေါ်လာတဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ Nexus Smartwatch ဆိုတာပါပဲ။
အောက်တိုဘာလရဲ့ လကုန်ရက်ဖြစ်တဲ့ ၃၁-ရက်နေ့မှာ အဆိုပါနာရီ ကို မိတ်ဆက်ပြသ လိုက်မယ်လို့ သတင်းများထွက်ပေါ်လျက်ရှိနေပါတယ်။
Nexus Smartwatch ကို Android 4.4 KitKat အသုံးပြုမယ့် Nexus-5 နဲ့တွဲဖက် အသုံးပြုဖို့ ထွက်ရှိလာမှာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းများက သုံးသပ် လျက်ရှိနေသလို အခြား Devices နဲ့လည်းတွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်လိမ့်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြောင်း သိရပါတယ်။
အကယ်လို့ ဒီသတင်းသာမှန်ကန်ခဲ့မယ်ဆိုပါက Samsung ကထုတ်တဲ့
Note-3,Samsung Smartwatch တို့နဲ့အပြိုင် Nexus မှာလည်းမြင်တွေ့ရဖို့
တော့ ရှိနေပြီဖြစ်ကြောင်း သုံးသပ်မိပါတယ်။
အဲဒီဖြစ်ရပ်နဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ကျောင်းကုန်းဒေသခံ ကိုပြည့်ဖြိုးဝေက အခုလိုပြောပါတယ်။
" ည ၇ နာရီကျော်လောက်ကျတော့ အဲ့ဒီအိမ် ဝိုင်းဖြိုကြမယ်၊ ဗလီဖြိုကြမယ်ဆိုပြီး ထွက်သွားတယ်၊ အဲဒီကုလားရှိတဲ့ အိမ်မှာပဲဖြိုတယ်၊ ပြီးတော့သူ့ညီမ အိမ်ကိုဖြိုတယ်၊ အိမ် ၅ လုံးပြိုသွားတယ်၊ ကုလားသင်္ချိုင်းမှာရှိတဲ့ အစောင့်တဲအိမ်က မီးရှို့ခံရတယ်၊ ပြီးတော့ မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရော၊ အာဏာပိုင်အဖွဲ့အစည်းရော ရောက်လာတယ်၊ သူတို့က မလုပ်ကြပါနဲ့လို့ တားတယ်"
ဒီဖြစ်စဉ်ဟာ ဦးလှဝင်းနဲ့ အရွယ်မရောက်သေးတဲ့ မနှင်းယုယုခိုင် တို့နဲ့ ပတ်သက်တယ်လို့သိရပါတယ်။
အခင်းဖြစ်ပွားချိန်မှာ သွားရောက် ထိမ်းသိမ်းခဲ့သူ ဧရာဝတီတိုင်း ဒေသကြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စာလှယ် ဦးသိန်းနိုင်က ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုလိုပြောပါတယ်။
" ဖြစ်တာက ကလေးမလေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျန်တဲ့ တစ်လလောက်တည်းက အနိုင်ထက်ကျင့်တာတွေ ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့် မအေက မသိဘူး၊ သိတဲ့အခါကျတော့ ရဲစခန်းမှာ တိုင်တဲ့ အခါကျတော့ ရဲကလည်း အချိန်မှီ တရားခံကို ခေါ်ထိန်းပြီးတော့၊ မနေ့က ညနေပိုင်းမှာပဲ မိုးချုပ်ခါစမှာ အဲ့မှာပဲ ပုသိမ်ကို ပို့လိုက်တယ်၊ ဒီတရားခံကို"
လာမယ့် နိုင်ဝင်ဘာ-၂၂ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ နဲ့ရောင်းချပေးမယ့်
စွမ်းအားမြင့် စူပါ Game Console ကြီးပါ။ Xi3 Piston Console လုိ့ခေါ်ပြီး
ပုံစံသုံးမျိုးဆိုတာက ကွန်ပျူတာနဲ့တွဲပြီး PC ဂိမ်း အဖြစ်အသုံးပြု ကစားလို့ ရမှာဖြစ်သလို၊TV နဲ့ချိတ်ဆက်ကစားမယ်ဆိုလည်း အဆင်ပြေစေမှာပါ။ ပုံစံနောက်တစ်မျိုးကတော့ လွယ်ကူစွာပြောရမယ်ဆိုရင် 3D မျက်မှန်ပုံစံ
တပ်ဆင်ပြီး ဂိမ်းစက်ကို ကျောပိုးအိတ်ထဲထည့်ကာ virtual reality ပုံစံကစားနည်းကို ဆိုလိုတာပါ။ Virtual reality ပုံစံ ကစားလို့ရမှာ
၄ လက်မ ပတ်လည်အရွယ်အစားရှိတဲ့ အဆိုပါဂိမ်းစက်ဟာ သယ်ဆောင်သွား
ရာမှာပေါ့ပါးစေဖို့အတွက် အလူမီနီယံကိုယ်ထည်နဲ့ တည်ဆောက်ထားပြီး
quad-core AMD Trinity chip ထည့်သွင်းထားပြီး 3.2GHz ထောက်ပံ့ပေး ထားပါတယ်။ RAM 8GB ရှိမှာဖြစ်ပြီး 128GB အထိသိုလှောင်သိမ်းဆည်းပေး ထားနိုင်ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်မလုံလောက်ပါကလည်း အပို 512GB အထိတိုးချဲ့အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ်။ထို့ပြင် အဆိုပါဂိမ်းစက်ဖြစ်တဲ့ Xi3 Piston Console ဟာ ရုပ်ထွက် Resolution 4096 x 2160 pixels အထိ ထောက်ပံ့နိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
စွမ်းဆောင်ရည်ဖြစ်တဲ့3Ways to Play ဆိုတဲ့အပိုင်းမှာ သာလွန်တယ်ထင်ရ
ပေမယ့် ကြီးမြင့်တဲ့ ဈေးနှုန်းကြောင့် လူနည်းစုသာစိတ်ဝင်စားပါလိမ့်မယ်။
ဒါပေမယ့် အကုန်ကျခံနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့ Xi3 Piston Console ကရွေးချယ်
ဖို့အသင့်တော်ဆုံး Console တစ်ခုလို့မြင်တယ်။
Steve Jobs ကလေးဘ၀ တုန်းက နေထိုင်ခဲ့တဲ့ အိမ်ကို သမိုင်းဝင် အဆောက်အဦ အဖြစ်ထားရှိဖို့ ကြေညာ
Apple ကုမ္ပဏီကို ပူးတွဲ တည်ထောင်ခဲ့တဲ့ Steve Jobs ကလေးဘ၀ တုန်းက နေထိုင်ခဲ့တဲ့ အိမ်ကို သမိုင်းဝင် အဆောက်အဦ အဖြစ်ထားရှိဖို့ ကြေညာလိုက်ပါတယ် ။ ၁၉၅၂ ခုနှစ်တုန်းက ဆောက်ခဲ့တဲ့ ဒီအိမ်လေးကို အနာဂတ်မှာ အမှတ်တရ အဖြစ် လေ့လာ ကြည့်ရှု နိုင်အောင် ထိန်းသိမ်းထားဖို့ စီစဉ်ခဲ့ကြတာ ဖြစ်ပါတယ် ။ မစ္စတာ Steve Jobs ဟာ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်တုန်းက ကွယ်လွန်သွားခဲ့တာဖြစ်ပြီး California ပြည်နယ် Los Altos က မြို့ပြ ရေးရာ စီစဉ်သူတွေကတော့ မိသားစုနဲ့ ဆွေးနွေးနေတယ်လို့ သိရပါတယ်။
၃ လကျော်အကြာ ပုလင်းထဲ အရက်စိမ်ထားတဲ့ မြွေက လူကို ကိုက်
ဆေးဖက်ဝင်တယ်ဆိုပြီး ပုလင်းတခုထဲမှာ အဖုံးပိတ်ပြီး အရက်နဲ့ နှပ်ထားတဲ့ မြွေက ၃ လကျော်ကြာ
ပြီးနောက် အသက်ပြန် ၀င်လာပြီး အမျိုးသမီး တဦးကို ကိုက်လိုက်ပါတယ်။
တရုတ်ပြည်မှာ မြွေကို အရက်စိမ်ပြီး ဆေးဖက်ဝင်အဖြစ် အသုံးပြုကြလေ့ရှိပါတယ်။ ၃ လကျော်ကြာ ပုလင်းထဲ အလုံပိတ် ပြီး အရက်နဲ့ နှပ် ထားတဲ့ မြွေ ( Pickled Snake ) က နိုးထလာပြီး ကိုက်လိုက်တဲ့ အဖြစ် ကတော့ တကယ့်ကို မယုံနိုင်ဖွယ်အံ့သြစရာ အဖြစ်ပါ။
ဒါဟာ တကယ့်ကိုပဲ တရုတ်ပြည် မြောက်ပိုင်း ဟာဘင် မြို့မှာ ဖြစ်တယ်လို့ ဂျပန် Yahoo သတင်းကို ကိုးကားပြီး The Mirror က ဖော်ပြထားပါတယ်။
အဆိုပါ မြွေကိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ အမျိုးသမီးက ပုလင်းထဲမှာ အရက်ထပ်ဖြည့်ဖို့ လုပ်တဲ့အချိန် မှာ မြွေက
ခေါင်း ထောင်လာတာ ကြောင့် သူက လက်ချောင်းနဲ့ မြွေကို ပုလင်းထဲ ပြန်ထည့်ဖို့ အလုပ်မှာ မြွေက သူ့လက်ကို ကိုက်လိုက်တာပါ။
ဒါနဲ့ မိသားစုဝင်တွေက ချက်ခြင်းပဲ မြွေကိုက်ခံရသူ အမျိုးသမီးကို ဆေးရုံကို ပို့လိုက်ကြတယ်။ ကံကောင်း စွာနဲ့ အဆိုပါ အမျိုးသမီးဟာ အသက်ရှင်ခဲ့ပါတယ်။
ဆီးရီးယားမှ ဓာတုလက်နက်များကိုကျွမ်းကျင်သူများ စတင်ဖျက်ဆီး
ဆီးရီးယား၏ ဓာတုလက် နက်များနှင့် လက်နက်ထုတ်လုပ် မှုများကို ဖျက်သိမ်းမည့်အစီအစဉ် ကို လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေးအဖွဲ့တစ် ဖွဲ့က အောက်တိုဘာ၆ရက်တွင် စတင်ပြီဖြစ်ကြောင်း နိုင်ငံတကာစစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့က AFP သတင်းဌာနသို့ ပြောခဲ့သည်။
UN မှအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဓာတုလက်နက်များ တိုက်ဖျက် ရေး( OPCW ) The Hague အ ခြေစိုက် အဖွဲ့အစည်းတို့သည်ဓာတုလက်နက်များကို စတင်ဖျက် ဆီးမည့်နေရာသို့ ထွက်ခွာခဲ့ကြ ကြောင်း သိရသည်။
''ဒီနေ့က ဓာတုလက်နက် တွေကို စဖျက်ဆီးတဲ့နေ့ပါပဲ။ ထိပ် ဖူးတပ်ဒုံးကျည်၊ ဓာတုဗုံးများ၊ ရွေ့ လျားလက်နက်များနဲ့ တခြား သောလက်နက်များကို ကြီးမား သောယာဉ်ကြီးများဖြင့် နင်းချေ ဖျက်ဆီးခဲ့ကြပါတယ်''ဟု နိုင်ငံ တကာစစ်ဆင်ရေးတပ်ဖွဲ့ သတင်း ပို့သူ၏ ပြောကြားချက်အရသိရ သည်။
ယခုရက်သတ္တပတ်အစော ပိုင်းက ဆီးရီးယား၏လက်နက် ထုတ်မှုပိုင်းတွင် အကျိုးရှိသော နည်းလမ်းအားလုံး သုံးခဲ့ပုံရကြောင်း OPCW အရာရှိကပြောခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ပစ္စည်းပြုလုပ်နည်း၊ ပြင်းထန်စွာ ပေါက်ကွဲအောင်ပြုလုပ်နည်း အ စရှိသော နည်းလမ်းများကိုလည်း အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း ယင်းကထပ်မံ ပြောခဲ့သည်။
လက်နက်ဖျက်သိမ်းရေး အဖွဲ့သည် ဆီးရီးယားအစိုးရက လွှဲပြောင်းပေးထားသော အစီ စဉ်အသေးစိတ်ကို အတည်ပြုပြီး စတင်အကောင်အထည်ဖော်ရန် ဒမတ်စကတ်သို့ အင်္ဂါနေ့ကရောက် ရှိခဲ့ကြသည်။ ''အဆင့်တစ်ကတော့ ဆီး ရီးယားတွေကို အဆုံးသတ်ဖို့ပါ ပဲ။ ပြီးတော့ အဆင့်နှစ်အနေနဲ့ တော့ လက်နက်တွေကို ဖျက်ဆီး ပစ်ဖို့ပဲ''ဟု စစ်ဆင်ရေးအဖွဲ့က ပြောသည်။
ဓာတုလက်နက်များကို ဖျက် ဆီးပြီး သမ္မတဘာရှားအယ်လ်အာ ဆတ်၏အုပ်ချုပ်မှုကို အလှည့် အပြောင်းဖြစ်ရန် အမေရိကန်- ရုရှားသဘောတူညီခဲ့ကြသည်။ သို့ သော် ဩဂုတ်၂၁ရက်က ဒမတ် စကတ်မြို့ပြင်ဘက်တွင် ဓာတု လက်နက်ဖြင့် တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ပွား ခဲ့သဖြင့် အမေရိကန်အစိုးရက အာဆတ်ကို အပြစ်တင်ခဲ့သော် လည်း ၎င်းကငြင်းဆန်ခဲ့သည်။ဆီးရီးယား၏ ဓာတုလက် နက်စက်ရုံကို ၂၀၁၄ခုနှစ် နှစ်လယ် ပိုင်းတွင်ဖျက်ဆီးပစ်ရန့် အြ ဆုံးအဖြတ်အရ သဘောတူညီခဲ့ ကြကြောင်း သိရသည်။
သူလိုလူမျိုး မည်သည့်အချိန်တွင် ကွယ်လွန်ကွယ်လွန် ဆုံးရှုံးမှုကြီး ဖြစ်သော်လည်း အိန္ဒိယနိုင်ငံ၏ ပျမ်းမျှသက်တမ်း ၆၅ ဒသမ ၅ နှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပျမ်းမျှသက်တမ်း ၆၅ ဒသမ ၇ နှင့်စာလျှင် ဦးဂိုအင်ကာသည် အသက်ရှည်ရှည် နေရသည်။ လူ့ဘဝတွင် ကြာကြာနေ လိုက်ရရုံသာမကဘဲ ရာစုနှစ်တစ်ဝက်လောက် သူသည် တရားကျင့်ရင်း၊ တရားကို ဖြန့်ဖြူးရင်း လူသန်းပေါင်းများစွာ အေးချမ်းအောင် စွမ်းဆောင် လိုက်နိုင်သဖြင့် လူ့ဘဝတွင် တန်အောင်လည်း နေလိုက်ရသည်။
ဘာသာမရွေး လူမျိုးမရွေး လာရောက် ကျင့်သုံးနိုင်သည့် ဝိပဿနာ ဆယ်ရက်စခန်းများကို ကမ္ဘာတွင် ကျယ်ပြန့်အောင် ဖြန့်ဖြူးခဲ့ခြင်းဖြင့် ကမ္ဘာကြီးကို တရားထိုင်တတ်အောင် သင်ကြားပေးခဲ့သူ မန္တလေး သား ဦးဂိုအင်ကာသည် အိန္ဒိယနွယ်ဖွား ဖြစ်သည်။ အသက် ၃၀ အရွယ်တွင် ရန်ကုန် ကုန်သည်နှင့် စက်မှု လုပ်ငန်းရှင်ကြီးများ အသင်းချုပ်၏ ဥက္ကဋ္ဌ ဖြစ်လာသူ၊ လူမှုရေး၊ ယဉ်ကျေးမှု အသင်းအဖွဲ့ပေါင်း များစွာတွင် ပါဝင်ပတ်သက်ပြီး အောင်မြင်မှုများစွာ ရရှိသူ ဦးဂိုအင်ကာသည် ကိုယ်တွင်း ငြိမ်းချမ်းရေးမူ မရသေးပေ။ စွဲကပ်နေသော ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာကြောင့် ဆွစ်ဇာလန်၊ အင်္ဂလန်၊ အမေရိကန်စသည့် နိုင်ငံများသို့ သွားရောက်ပြီး သမားတော်များနှင့် ကြပ်ကြပ်မတ်မတ် ကုသသော်လည်း သဲထဲရေသွန်သာ။ ဝိပဿနာကို ကျင့်ကြံနေသလို သင်ကြား ပို့ချပေးနေသည့် လွတ်လပ်သော မြန်မာ နိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံး ငွေစာရင်းမင်းကြီး ဦးဘခင်ထံတွင် သွားရောက် တရားထိုင်ရန် မိတ်ဆွေတစ်ဦးက အကြံပေးသည်။
ဇင်ဘာသာ ဘုန်းတော်ကြီး Norman Fische က ဦးဂိုအင်ကာကို တွေ့ဆုံ မေးမြန်းချက်တွင် ဦးဘခင်ထံ ရောက်ရှိခဲ့ပုံကို ဦးဂိုအင်ကာက အောက်ပါအတိုင်း ဖြေကြားထားသည်။
ဦးဘခင်က လာရသည့် အကြောင်းရင်းကို မေးသည့်အခါ ဦးဂိုအင်ကာက ‘ခေါင်းကိုက် ပျောက်ချင်လို့ပါ’ ဟု ဖြေသည်။ ဦးဘခင်က ‘ဆရာဝန်ထံသို့သာ သွားပါ’ ‘No. Goenka. I can’t help you. Go toadoctor’ ဟု ယတိပြတ်ဆိုသည်။ ဆရာကြီးဦးဘခင်ထံ ဦးဂိုအင်ကာ ရောက်လာသည့် အချိန်တွင် မြန်မာနိုင်ငံတွင်းရှိ အိန္ဒိယနွယ်ဖွားတို့ အသိုင်းအဝိုင်းတွင် သူသည် လျှမ်းလျှမ်းတောက် ဖြစ်နေချိန်။ မည်သည့် ဂုရုမဆို သူကဲ့သို့သော သူမျိုးကို လွယ်လွယ်ကူကူ တပည့်တော်ချင်မည် ဖြစ်သော်လည်း ဆရာကြီး ဦးဘခင်ကမူ ထိုသို့မဟုတ်၊ ဦးဂိုအင်ကာကို အလွယ်တကူ လက်မခံ။ “အိန္ဒိယနိုင်ငံကလာတဲ့ အမြင့်မြတ်ဆုံး အကျင့်ကို ကျွန်တော် သင်ပေးနေတာ။ ဒါကို တန်ဖိုးမချပါနဲ့။ ရောဂါတစ်ခု ပျောက်ဖို့တင်ပဲ မသုံးပါနဲ့။ ဒီအကျင့်က ဒုက္ခကနေ ခင်ဗျားကို လွတ်မြောက်စေမှာပါ၊ ခေါင်းကိုက်တဲ့ ဒုက္ခလေးကတင်တော့ မဟုတ်ဘူး”
ဦးဂိုအင်ကာ ကြည်ညိုသွားပြီ ဖြစ်သော်လည်း ဗုဒ္ဓဘာသာ ဝင်ရမည်လားဟု ဦးဂိုအင်ကာက စိုးရိမ်နေ သည်။ ဦးဘခင်က မေးသည်၊ ‘ခင်ဗျားက ရန်ကုန်က ဟိန္ဒူဘာသာဝင်တွေရဲ့ ခေါင်းဆောင် တစ်ယောက်ပဲ။ သီလစောင့်တာကို ခင်ဗျားရဲ့ဘာသာက တားမြစ်ပါသလား’။ သီလစောင့်ရန်ကို မည်သည့် ဘာသာကမျှ တားမြစ်မည် မဟုတ်သဖြင့် ဦးဂိုအင်ကာက ‘သီလကို ကန့်ကွက်ရန် မရှိပါ’ ဟု ဖြေသည်။ ‘စိတ်ကို မထိန်းနိုင်လျှင် သီလဘယ်လို စောင့်မလဲ၊ စိတ်ကို ထိန်းနိုင်ရန် သမာဓိကို သင်ပေးမယ်’ ဟု ဦးဘခင်က ပြောသည်။
“ဟိန္ဒူဘာသာမှာ သမာဓိက လွန်စွာမြင့်မား တန်ဖိုးထား ခံရသောအရာပဲ။ ဒါ့ကြောင့် သမာဓိကို ကန့်ကွက်ရန် မရှိပါ” ဟု ဦးဂိုအင်ကာက ဖြေသည်။ ‘သမာဓိ’ သည် စိတ်မချရသေး၊ လူ၏ အတွင်းစိတ်သည် အိပ်နေသော မီးတောင်နှင့် တူသည့်အတွက် အချိန်မရွေးထကြွ သောင်းကျန်းပြီး သီလ ကျိုးပေါက်နိုင်သည့်အတွက် စိတ်အမြင့်ဆုံးအဆင့် သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်း (ဝါ) ပညာကို သင်ပေးမည်ဟု ဦးဘခင်က ပြောသည်။ ‘ပညာကို ကန့်ကွက်ရန် မရှိပါ’ ဦးဂိုအင်ကာ ပြန်ဖြေသည်။
‘သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာကိုသာ လက်ခံပါ’ ဟု ဦးဘခင်က ပြောသောကြောင့် ဦးဂိုအင်ကာ စိတ်ချပြီး တရားထိုင်လိုက်သောအခါ ဖြစ်နေကျ ခေါင်းကိုက်ဝေဒနာဆိုးသည် ပျောက်ကင်းသွားသည်။ ဘုံဘေ (ယခုမွန်ဘိုင်း) တွင် တရားလာပြရန် ဖိတ်ခေါ်ခံရသည်မှ အစပြုကာ စီးပွားရေးကို မိသားစုနှင့် လွှဲလိုက်ပြီး တရားပြလိုက်သည်မှာ နောင်နှစ်ပေါင်း ၅၀ လုံးလုံး သူ့ဘဝကို တရားထိုင်ခြင်း၊ သင်ကြားခြင်းထဲတွင် နစ်မြုပ်ထားလိုက်ရာ ကွယ်လွန်ချိန်အထိ ဖြစ်သည်။
Photo: events.dhamma.org၁၉၆၂ ဆိုရှယ်လစ်စနစ်သို့ အကူးအပြောင်းတွင် ဦးဂိုအင်ကာ ပိုင်ဆိုင်သော လုပ်ငန်းများသည် ပြည်သူ ပိုင်သိမ်းသည့် အထဲတွင် ပါသွားသည်။ သို့သော် ဦးဂိုအင်ကာတွင် ဝိပဿနာ အခံရှိနှင့် နေပြီးသည့်အတွက် သူ့လောက် ဆုံးရှုံးမှုမများသော စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတို့ကဲ့သို့ ပူဆွေးသောက မဖြစ်ပေါ်ခဲ့။ ၁၉၆၉တွင် ဦးဂိုအင်ကာသည် အိန္ဒိယနိုင်ငံသို့ ပြန်သွားကာ ဝိပဿနာ စတင်ရာ ဗုဒ္ဓ၏ မွေးရပ်မြေ အိန္ဒိယတွင် ပျောက်ကွယ်နေပြီ ဖြစ်သော ဝိပဿနာကို ပြန်လည် မိတ်ဆက်ပေးခဲ့သည်။
အိန္ဒိယသို့ ပြန်ရောက်ကတည်းက စီးပွားရေးကို မိသားစုဝင်များသို့ လွှဲအပ်လိုက်ကာ တရားထဲသို့ ခြေစုံပစ်ဝင်လိုက်သည်။ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင် တရားစခန်းပေါင်း ၆၀ နှင့် တစ်ကမ္ဘာလုံးတွင် တရားစခန်းပေါင်း ၁၇၃ ခုတို့ကို ဖွင့်လှစ် ပို့ချပေးခဲ့သည်။ ဦးဂိုအင်ကာနှင့်တကွ ဝိပဿနာ တရားစခန်းတို့၏သတင်း ကမ္ဘာအနှံ့ မွှေးပျံ့သောကြောင့် ကမ္ဘာပေါ်ရှိ အဖွဲ့အစည်း ကြီးငယ်များက ဟောပြော ပို့ချရန် ဖိတ်ကြားခဲ့ရာ ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ (United Nations General Assembly)၊ အိန္ဒိယ ပါလီမန်၊ ကမ္ဘာ့စီးပွားရေးဖိုရမ် World Economic Forum Davos၊ မက်ဆာချူးဆက် စက်မှုတက္ကသိုလ် Massachusetts Institute of Technology (MIT) နှင့် ဆီလီကွန်တောင်ကြား အိန္ဒိယ ပညာသည်များ အစည်းအရုံးတို့တွင် ဝိပဿနာကို ပို့ချခဲ့သည်။ တိဗက်သာသနာ၏ အထွတ်အထိပ်ဖြစ်သည့် ဒလိုင်းလားမားက အကူအညီ တောင်းသောကြောင့် တိဗက်ဘုန်းတော်ကြီး များကိုလည်း ဦးဂိုအင်ကာ သွားရောက် ဝိပဿနာ ပို့ချသည်။
တရားမထိုင်မီ အချိန်က ဦးဂိုအင်ကာသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင်း စီးပွားရေးတွင် အောင်မြင်မှု ကြီးခဲ့သည်။ ကိုယ်တိုင် တရားထိုင်အပြီးတွင် စီးပွားကိုစွန့်ကာ တရားထိုင်ခြင်း၏ မိခင်နိုင်ငံ အိန္ဒိယသို့ တရားအကျင့်ကို ပြန်လည် သယ်ဆောင်သွားနိုင်ခဲ့သည်။ ထိုမှတစ်ဆင့် ကမ္ဘာကြီးကို တရားထိုင်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ ယနေ့ကမ္ဘာတွင် တရားထိုင်သူတို့သည် ဘာသာလူမျိုး မရွေး တစ်နှစ်ထက် တစ်နှစ်တိုးသည်ထက် တိုးလာကြပြီ။ အမေရိကန် တရားထိုင်သူတို့သည် တစ်နှစ်လျှင် တစ်သန်းခန့် တိုးလာကြသည်။
ဝိပဿနာကို မြန်မာ့မြေမှ ပြန်လည် စတင်သည်ဟု ဂုဏ်ယူရုံမျှက ကိုယ်တွေ့ကျင့်ကြံနိုင်ခြင်းဖြင့် အနည်းဆုံးအားဖြင့် ကျန်းမာရေးကောင်း၊ အာရုံစူးစိုက် နိုင်စွမ်းအား ကောင်းသဖြင့် အလုပ်တွင်ကျယ် အောင်မြင်ပြီး အမြင့်ဆုံးအားဖြင့် ဉာဏ်အလင်း ရနိုင်ပါသည်။
ဦးဂိုအင်ကာ မြန်မာနိုင်ငံမှ မျိုးစေ့ယူသွားပြီး အိန္ဒိယတွင် စိုက်ပျိုး၊ ထိုမှတစ်ဆင့် ကမ္ဘာသို့ ပျံ့နှံ့သွားသည့် ဝိပဿနာသည် မိခင်မြန်မာနိုင်ငံတွင်ရော မည်သို့သော အခြေဆိုက်နေသနည်း။ အနောက်တိုင်းသားတို့ပင် ဝိပဿနာကို တန်ဖိုးထား ကျင့်ကြံနေကြချိန်တွင် မြန်မာတို့ နေ့စဉ်ဘဝတွင် မည်မျှ သတိ ကပ်နိုင်သနည်း။ ထိုမေးခွန်းတို့သည် ထေရဝါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာဟု မိမိတို့ကိုယ်ကို ဂုဏ်ယူနေကြသော မြန်မာတို့အတွက် မြန်မာ့မြေဖွား ဝိပဿနာ ဆရာကြီး ကွယ်လွန်ချိန်တွင် မေးသင့်မေးထိုက်သော မေးခွန်းများ ဖြစ်ပေသည်။
တရုပ်ပြည်မှ တင်သွင်းလာသော အစားအစာများကို လုံးဝ (လုံးဝ) ဝယ်မစားကြပါနဲ့။
၁။ တရုတ်က သွင်းတဲ့ ဆိတ်သားခြောက် ဆိုရင် လုံးဝ ဝယ်စားဖို့ စိတ်မကူးပါနဲ့ တဲ့။ တရုပ်မှာ ဆိတ်သားဟာ တကယ့်ရှားပါးအစာပါ။ ဝက်သားကို ဓါတုဆေးတွေမထည့်ခင်မှာ အာသံ ဘက်က ဝယ်ပြီးလှောင်ထားတဲ့ ဆိတ်ကျင်ငယ်ရည်မှာ ၃၊၄ ရက်စိမ်ပြီး အခြောက်လှမ်းပြီးမှ အပူပေး ဆိတ်သားခြောက်ဖြစ်စေပါသတဲ့။ ၂။ မြီးရှည်ဆိုတာ တရုပ်စကားနဲ့ခေါ်တဲ့ မုန့်ဟင်းခါးဖတ်ပါ။ ဆန်နဲ့လုပ်ထားတဲ့ မုန့်ဖတ် အလုံး အကြီး အသေးမှန်သမျှကို တရုပ်တွေက မြီးရှည်လို့ဘဲခေါ်ပါတယ်။ အဲဒီမုန့်ဖတ် ရယ်ဒီမိတ် တွေဟာ တချို့ မုန့်တီဆိုင်တွေက အပြုတ်ခံတယ်၊အလုံးလှတယ်၊ရောင်းပန်းလှပြီး အနံ့ အသက် မွှေး တယ်ဆိုပြီး သုံးကြပါသတဲ့။ အမှန်တော့ အဲဒီမြီးရှည်တွေဟာ ပလပ်စတစ်တွေပါတဲ့။ ကုန်တိုက်တွေ မှာတင်တဲ့ ရယ်ဒီမိတ်တွေကိုမှ သန့်တယ်ဆိုပြီး ကုန်တိုက်တွေမှာသာ ဈေးဝယ်လေ့ရှိတဲ့ လူတန်းစားသစ်တရပ် မြန်မာပြည်မှာ ပေါ်လာတာ မကြာသေးပါဘူး။ ချင့်ချိန်ဆင်ခြင်ပြီးမှသာ သုံးစွဲသင့်ပါတယ်။ ၃။ ပင်လယ်ရေညှိဆို အခုတလော မြန်မာပြည်မှာ သိပ်ပေါ်ပြူလာဖြစ်တာဘဲဆိုပြီး ဟိုတလောက ဘန်ကောက်ကို ရှော့ပင်လာတဲ့ သားအမိတစ်စုက ပြောသွားပါတယ်။ ကိုရီးယားကားကြည့်ရင်း ပင်လယ်ရေညှိလေးဝါးရင်း ဆိုဘဲ။ ကောင်းပါတယ်။ မကောင်းတာကတော့ အဲဒီပင်လယ်ရေညှိကို ပလပ်စတစ်ကျွတ်ကျွတ်အိပ် ကို ပိုကျွတ်အောင် ဓါတုဆေးစိမ်ပြီး အစစ်နဲ့ ရောပြီး ထုတ်လုပ် ပါသတဲ့။ ခေတ်မှီတိုးတက်လာတာနဲ့အမျှ ပလပ်စတစ်လဲ ဗိုက်ထဲ အစာအဖြစ်ရောက်နေပါပြီ။ ၄။ နောက်ဆုံးတခုကတော့ အများသိကြတဲ့ ပလပ်စတစ်ကြက်ဥပါ။ သိပြီးသား ဟိုးလေးတကျော် ဆိုတော့ အကျယ်ချဲ့မရေးတော့ပါ။ ဒါတွေအားလုံး တရုပ်ပြည်မှာ အချင်းချင်း လိမ်ရောင်းကြတဲ့ အပြင် ၊ နယ်စပ်ကနေ မြန်မာပြည်ထဲကိုပါ တင်သွင်း ရောင်းချပါသတဲ့။ (ကိုဇော်) မှတ်ချက် ။ ။ အထက်ဖော်ပြပါ အလွန်အန္တရာယ်ရှိသာ အစားအစာ အတုများ အပြင် ဆန် ၊ ပြားရည် ၊ နွားနို့ ၊ ကလေး သရေစာ မုန့်မျိုးစုံ နှင့် အခြားမြောက်များ လှစွာသော အစားအစာ အတုများ တရုပ်ပြည်၌ နေ့စဉ်ထွက်ရှိနေပြီး တရုပ်ပြည်တွင်း၌သာ မက ၊ နယ်စပ်ဂိတ်များမှ တဆင့်တင်သွင်းကာ မြန်မာပြည်တွင်းရှိ ဈေးဆိုင်များ၌လည်း ရောင်းချနေပါသောကြောင့် တရုပ်ပြည်မှ တင်သွင်းလာသော အစားအစာများကို လုံးဝ (လုံးဝ) ဝယ်မစားကြပါနဲ့။
ဒဂုံဆိမ်ကမ်းမြို့နယ်၆၇ရပ်ကွက်မှာနေထိုင်တဲ့ပြည်သူအယောက် ၁၀၀ကျော်က အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနကတိပေးတဲ့အတိုင်းပြုလုပ် ပေးဖို့ ယနေ့ မနက်ပိုင်းမှာတတိယအကြိမ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်
ပေးဖို့ ယနေ့ မနက်ပိုင်းမှာတတိယအကြိမ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်နေပါတယ်
အဆိုပါသံုးချက်က အိုးအိမ်ဦးစီးဌာနမှကတိပေးတဲ့အတိုင်း ဆင်းရဲသားပြည်သူတွေကိုအလုပ်သမားတန်းလျားဆောက်ပေးဖို့/အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းဖန်တီးပေးဖို့ ၊တန်ဖိုးနည်းအိမိရာစီမံကိန်းပြီးသွားတဲ့အခါတိုက်ခန်းတွေကိုအရစ်ကျစနစ်နဲ့ရောင်းပေးဖို့စတာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။
Voice ။ ။ မမေခလာနဲ့ အစ်မနဲ့ နှစ်ယောက်တွဲ ဖျော်ဖြေပွဲလေးလုပ်ဖို့ စိတ်ကူး ဖြစ်ပုံလေး ပြောပြပေးပါဦး။
Voice ။ ။ ဂီတလောကမှာ မေဆွိနဲ့ မေခလာက မတည့်ကြဘူးလို့ ကောလာဟလ ထွက်ခဲ့ဖူးတယ်နော်။ မဆွေတို့ နှစ်ယောက်တွဲ ဖျော်ဖြေပွဲဆိုပြီး မရှိခဲ့တာက ပွဲစီစဉ်သူတွေက မလုပ်ဖြစ်ခဲ့လို့လား။ တခြားဘာ အကြောင်းတွေ ရှိဦးမလဲ။
MS ။ ။ အမှန်တကယ်ကတော့ အားလုံးက မေ့သွားတာ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ မြန်မာ ပြည်ဦးသိန်းတန်က Play Boy အဖွဲ့ကနေ ထွက်လာပြီး LPJ ဆိုပြီး တီးဝိုင်းထောင်တဲ့ အချိန်မှာ အစ်မရော၊ မငယ်ရော၊ ကိုင်ဇာရော၊ တူးတူးတို့ရော၊ ကိုခိုင်ထူးတို့ရော အဲဒီတီးဝိုင်းမှာ ပင်တိုင်အနေနဲ့ ဆိုကြတယ်။ အစ်မတို့ အဲဒီတုန်းကဆို ပြည်ထောင်စု အလံကြီး သယ်သွားတဲ့ မြို့တွေမှာ အမြဲတမ်း ညဘက် စတိတ်ရှိုး ရှိတယ်။ အဲဒီပွဲတွေမှာဆိုရင် မငယ်နဲ့အစ်မတို့ အမြဲတမ်း ဆိုဖြစ်တယ်။ နောက်ပိုင်း ကျတော့မှ ကိုင်ဇာနဲ့မငယ်နဲ့ အိမ်ထောင်ပြုသွားတဲ့ အချိန်မှာ ကောလာဟလ လေးတွေ ထွက်လာတာပေါ့နော်။ အစ်မအနေနဲ့ ကတော့ ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။
MS ။ ။ အစ်မကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ‘မောင် . . ယုံလား . . နှစ်ယောက်မရှိဘူး’ ပွဲတုန်းက ဆိုထားတဲ့ သီချင်းလေးတွေနဲ့ မတူအောင် နည်းနည်းစဉ်းစားပြီး ဆိုမယ်လို့ စိတ်ကူးထားတယ်။ နောက်ပြီး Plus3တီးဝိုင်းနဲ့လည်း နည်းနည်းညှိပြီး မတူတဲ့ သီချင်းလေးတွေ ရွေးဆိုမှာပေါ့။ မငယ်နဲ့လည်း တစ်ယောက်သီချင်း တစ်ယောက် အတူတွဲပြီး ဆိုကြဦးမယ်။ သူအရင်တုန်းက ဆိုခဲ့တဲ့ သီချင်းတွေ ဆိုရင်တော့ အစ်မအတွက် အဆင်ပြေတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း ထွက်ထားတဲ့ စီးရီး တွေထဲက သီချင်းတွေ သူဆိုမယ်ဆိုရင်တော့ မဆွေက စာသားရအောင် ကျက်ရမှာပေါ့။
MS ။ ။ မြန်မာသံ သီချင်းတွေကတော့ မငယ်နဲ့ နှစ်ယောက် တိုင်ပင်ပြီးဆိုဖို့ ရှိပါတယ်။ ဥပမာ- မငယ်က သူအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ တသိမ့်သိမ့်သူလို သီချင်းမျိုးကို တို့နဲ့တွဲပြီး ဆိုမယ် ဆိုရင်တော့ တို့က ဆိုပေးရမှာပေါ့။ အဓိကကတော့ လာကြည့်တဲ့ ပရိသတ်အတွက် အစ်မတို့ ပုံစံလေးတွေ မတူအောင် လုပ်ဖို့ စိတ်ကူးထားတယ်။ မငယ်ရဲ့ ဖျော်ဖြေမှု အပိုင်းမှာက ကလေးတွေနဲ့ Performance လေးတွေ ထည့်ဦးမယ်ဆိုတော့ ဆန်းဆန်းပြားပြား လေးတော့ ဖြစ်မှာပါ။
MS ။ ။ အစ်မအတွက် အဲဒါက ဘာမှပြဿနာ မရှိဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကိုယ်နဲ့ အလုပ်အတူ တွဲလုပ်တဲ့သူတွေက မြန်မာနိုင်ငံမှာ အစ်မက နာမည်ကြီးတဲ့ အဆိုတော် တစ်ယောက်ဆိုတာ သူတို့သိချင်မှ သိမှာလေ။ သာမန်လူ တစ်ယောက်အနေနဲ့ အစ်မက ဒီအလုပ်ကို လုပ်တာဆိုတော့ ကိုယ်က နိုင်ငံကျော် အဆိုတော် တစ်ယောက်ပါလို့ ပြောစရာလည်း မလိုဘူးလို့ ထင်တယ်။
ဆရာမအလုပ်ကို လုပ်တဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်နဲ့ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက် ဆရာမတွေအားလုံးနဲ့ အစ်မ အဆင်ပြေအောင် ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံတယ်။ ကိုယ့်အလုပ်ကိုလည်း တာဝန် ကျေအောင် လုပ်တဲ့အခါကျတော့ ဘာမှတော့ အနှောင့်အယှက် မရှိဘူး။ ဒါပေမဲ့ အရမ်းခင်တဲ့ ဆရာမ နှစ်ယောက်ကတော့ အစ်မက မြန်မာပြည်က နာမည်ကြီး အဆိုတော်ဆိုတာ သိကြတယ်။ ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ကွာ။ မြန်မာပြည်မှာ နေတုန်းကဆို အိမ်မှာခိုင်းတဲ့သူ ရှိတယ်။ တစ်နေရာရာ သွားမယ်ဆိုလည်း ဒရိုင်ဘာက ကားမောင်း ပို့ပေးတယ်။ အမေရိကမှာတော့ အဲဒီလိုတွေ မရှိဘူးပေါ့။ အဲဒီတော့ အစ်မက ပင်ပန်းတဲ့ အခါတွေမှာလည်း ညည်းမိတယ်။ မြန်မာပြည်မှာဆိုရင် ဘယ်သူက ဘယ်လိုလုပ်ပေးမှာပေါ့။ တစ်နေရာရာ သွားရင်လည်း ကိုယ်တိုင်ကား မောင်းစရာ မလိုဘူးလို့ ပြောတဲ့အခါ သူတို့က နင်အဲ့ဒီလို နေတာလားဆိုပြီး အံ့သြတကြီးနဲ့ မေးကြတယ်။ အဲ့ဒီအခါ အစ်မက ဟုတ်တယ်။ အစ်မ အမေဆိုရင် အကယ်ဒမီ ဘယ်နှဆု ရထားတဲ့ မင်းသမီးပေါ့နော်။ သူတို့နိုင်ငံက အယ်လီဇဘတ် တေလာတို့၊ ဘာတို့နဲ့ Compare လုပ်ပြတယ်။ အစ်မအကြောင်းကို အဲ့ဒီဆရာမ နှစ်ယောက်တော့ သိတယ်။ ဒါပေမဲ့ သူတို့က အစ်မတို့နိုင်ငံက လူတွေလို မဟုတ်ဘူး။ ကိုယ်နဲ့မဆိုင်တဲ့ ကိစ္စဆို ဘာမှပြောလေ့ ထုံးစံမရှိဘူး။ အဲဒီတော့ ကျန်တဲ့သူတွေကတော့ အစ်မအကြောင်းကို မသိကြ ဘူး။
MS ။ ။ အစ်မ သဘောကျတယ်။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ကလေးတွေနဲ့ အလုပ်လုပ်ရတာ အစ်မကြိုက်တယ်။ အခုဒီမှာဆိုလည်း အဲဒီကျောင်းတွေ ဖွင့်နေကြပြီလေ။ ဒါပေမဲ့ ဒီက ကလေးကျောင်းတွေက အစ်မ ဟိုမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းတွေလောက်တော့ မဖြစ်သေးဘူး။ လိုအပ်ချက် ကလေးတွေ အစ်မမြင်နေတယ်။ တဖြည်းဖြည်းတော့ ဖြစ်လာမှာပေါ့လေ။ တကယ်တော့ ကလေး တွေကို ပြုစုပျိုးထောင်တယ် ဆိုတာ လွယ်တဲ့ကိစ္စ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမှာသာ မိဘတွေက ကိုယ့်ကလေးကိုယ် Take Care လုပ်ကြတာ။ ဟိုမှာက မိဘတွေက ကလေးမွေးပြီး သုံးလလောက်နေလို့ ကိုယ့်အလုပ်တွေ ကိုယ်သွားကြတဲ့အခါ အိမ်မှာ ကြည့်ပေးမယ့်သူ မရှိဘူးလေ။ အဲဒီတော့ ကလေးတွေကို Day Care ပို့ကြတာမျိုးတို့၊ ကျောင်းတွေ ပို့ကြတာမျိုး ဆိုတော့ ဆရာမတွေနဲ့ ကလေးတွေကပိုပြီး Close ဖြစ်တယ်။ ကလေးတွေမှာ Tension ရတာတို့၊ ကလေးတွေက ဆရာမတွေကို ချစ်ခင်ဖို့ ဆိုတာက ဆရာမတွေအပေါ် အများကြီး မူတည်တယ်။ သူတို့ ကြီးပြင်းလာတဲ့အခါ ကောင်းမွန်တဲ့ ဘဝလမ်းကြောင်းကို လျှောက်နိုင်ဖို့ ပြုစုပျိုးထောင်ပေးရတဲ့ အတွက် တို့ကတော့ ဆရာမဘဝကို ကြိုက်တယ်။
Voice ။ ။ အစ်မက အမေရိကမှာ ဆရာမအဖြစ် တော်တော်ကြာကြာ လုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ သူတို့ဆီက သင်ကြားမှုပုံစံနဲ့ ကျွန်တော်တို့ဆီက သင်ကြားမှုပုံစံမှာ ကွာဟနေတဲ့ အချက်တွေကို ပြောပြပေးပါဦး။
MS ။ ။ သင်ကြားမှု အပိုင်းကတော့ သိပ်ကွာမယ် မထင်ဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကလေးတွေရဲ့ လုံခြုံမှု အပိုင်းကတော့ ကွာမယ်ထင်တယ်။ အစ်မတို့ ဟိုကကျောင်းတွေက Private School တွေဆိုပေမယ့် Clinic ရှိတယ်။ Registered Nurse တွေရှိတယ်။ အဲဒီအတွက် ကလေးတွေ တစ်ခုခုဖြစ်ရင် ကုသ ပေးနိုင်တယ်။ နောက်ပြီး အစ်မတို့ဆရာမ တွေကလည်း ကလေးတွေ ဘယ်အချိန်မှာ ဘာဖြစ်တတ်တယ် ဆိုတာ Training ယူထားရတယ်။ ဒီမှာတော့ အဲ့ဒီအပိုင်းတွေ နည်းနည်း လိုသေးတယ် ထင်တယ်။
Voice ။ ။ အစ်မ အလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ ကျောင်းနဲ့ ဆရာမလုပ်သက် ဘယ်လောက်မှာ အနားယူခဲ့တယ် ဆိုတာ ပြောပြပေးပါဦး။
Voice ။ ။ အစ်မရဲ့ရှေ့ဆက်မယ့် ဘဝကိုရော ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ဆက်သွားဖို့ စဉ်းစားထားလဲ။
MS ။ ။ ဇာတ်ကား ပြန်ရိုက်ဖို့ကတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လုပ်နိုင်၊ မလုပ်နိုင် သေချာဆန်းစစ် ပြီးတော့မှပဲ စဉ်းစားဖြစ်မယ်။ အစ်မက ဇာတ်ကားတွေ မရိုက်တာ တော်တော်ကြာပါပြီ။ ရုပ်ရှင်ရိုက်တယ် ဆိုတာလည်း ရုပ်ရှင်လောကမှာ တောက်လျှောက်ကြီး ရိုက်ပြီးနေခဲ့တာ မဟုတ်ဘူး။ ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား အနည်းငယ်လောက် ရိုက်ပြီး သီချင်းပဲ ဆိုခဲ့တာဆိုတော့ ရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ အချိန်က တိုပါတယ်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ခဲ့တဲ့ အခါမှာလည်း ကိုယ်နဲ့ ဦးလေးလို၊ အစ်ကိုလိုခင်ခဲ့တဲ့ သူတွေနဲ့သာ ရိုက်ခဲ့တာ ဆိုတော့လေ။ အဲဒီလို လူမျိုးတွေကသာ ပြန်ပြီး ကမ်းလှမ်းမယ်ဆိုရင် အစ်မစဉ်းစား ဖြစ်မှာပါ။ အထူးသဖြင့် ဦးမီးပွားတို့ ပေါ့နော်။
Voice ။ ။ ဒီပွဲမှာ ဦးကိုင်ဇာကိုရော ဧည့်သည် အဆိုတော်အနေနဲ့ ခေါ်ဆိုဖို့ ရှိလား။
MS ။ ။ အစ်မကတော့ သူ အချိန်လေးပေးပြီး အစ်မတို့ နှစ်ယောက်ရှိုးမှာ လာ ဆိုပေးမယ်ဆိုရင် Welcome ပါပဲ။ ဒါမှမဟုတ် ဒီမှာ မဆိုဖြစ်ဘူးဆိုလည်း နောက်တစ်ခါ ပွဲလုပ်တဲ့အခါ ဆုံကြမှာပေါ့။ ကိုယ်နဲ့ သူနဲ့က ရွယ်တူတွေလည်း ဖြစ်တယ်။ သူ့သီချင်း၊ ကိုယ့်သီချင်းလည်း သိနေကြတာ ဆိုတော့ အချိန်မရွေး အဆင်ပြေပါတယ်။
Voice ။ ။ အစ်မတို့ နှစ်ယောက်ရဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲကို လာရောက် ကြည့်ရှုမယ့် ပရိသတ်တွေ အတွက် ဒီပွဲလေးက ဘယ်လိုရသမျိုး ပေးစွမ်းနိုင်မယ်ထင်လဲ။
MS ။ ။ အစ်မကတော့ ဒီပွဲလေးကို လာကြည့်တဲ့ ပရိသတ်တွေ အရမ်းကောင်းတဲ့ ပွဲဆိုပြီး ပီတိလေးနဲ့ ပြန်သွားတာမျိုး ဖြစ်စေချင်တယ်။ သေချာတာကတော့ ဒီပွဲလေးကို အစ်မတို့ အရွယ်တန်း ပရိသတ်တွေပဲ လာကြည့်ကြမှာပါ။ တကယ်လို့ သူတို့ သားသမီးတွေကို ခေါ်ပြီး လာကြည့်တယ် ဆိုရင် တောင်မှ ဒါမေမေတို့ ငယ်ငယ်တုန်းက နာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ အဆိုတော်တွေလို့ ပြောပြီး ခေါ်လာလို့သာ စိတ်ဝင်စားတဲ့ ကလေးတွေက လိုက်ချင် လိုက်လာကြမှာပါ။ သူတို့ရဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့ အချိန်တွေကို ပေးပြီး လာကြမယ့်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေ စိတ်ကျေနပ်မှု ရစေမယ့် ပွဲမျိုးဖြစ်အောင် အစ်မတို့ ကြိုးစားမှာပါ။
လူတစ်ယောက်အောင်မြင်ရန်အတွက် ကြိုးစားရမည့်နည်းလမ်းများကို ဟောပြောခဲ့ခြင်း
ရန်ကုန်မြို့Junction Square ရှိMyanmar Media Development Center(MMDC) မှာ အောက်တိုဘာလ ၅ ရက်နေ့က လူတစ်ယောက်အောင်မြင်ဖို့အတွက်
ကြိုးစားရမယ့်နည်းလမ်း များကို Fuel Your Life With Positive Energyခေါင်းစဉ်နဲ့ ဟောပြောခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ အဆိုပါ ဟောပြောပွဲမှာတော့ စာရေးဆရာလင်းသိုက်ညွန့်မှ ဟောပြောပေးခဲ့တာဖြစ်ပြီး လူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့ ဘ၀တိုးတက်ရေးအကြောင်းများကို ဟောပြောဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ဟောပြောရာမှာ အောင်မြင်မှုနဲ့ ပတ်သက်ပြီး လူတစ်ယောက်ဟာ အောင်မြင်မှုရပြီဆိုရင် ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ကျေနပ်မှုရှိရမှာ ဖြစ်သလို ကိုယ်ရတဲ့အောင်မြင်မှုဟာ ရိုးသားမှုရှိပြီး စိန်ခေါ်မှုများလည်းရှိရမှာဖြစ်တယ်လို့ သိရပါတယ်။
လူတစ်ယောက်ဟာ အောင်မြင်မှုကို လိုချင် တယ်ဆိုရင် စွမ်းဆောင်ရည် လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်း၊ လုပ်ဆောင်ချင်စိတ်နဲ့ အခွင့်အလမ်း တွေလည်း ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ဆောင်ချက်တိုင်းမှာတော့ လူအများအသိအမှတ်ပြုတဲ့ အောင်မြင်မှုဟာ ကိုယ့်ဘ၀အတွက်လည်း ပိုမိုပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်တယ်လို့ အဆိုပါ ဟောပြောပွဲမှ သိရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် စာရေးဆရာလင်းသိုက်ညွန့်မှလည်း လူတိုင်းဟာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် စိတ်ဓါတ်ကျစေမယ့်စကားမပြောသင့်ကြောင်း တက်ကြွမှုရှိနိုင်မယ့်စကားကို ရွေးချယ်ပြောသင့် ကြောင်းနဲ့ ဒါမှသာ အောင်မြင်မှုရရှိနိုင်တဲ့ လူတော်တစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်မယ်လို့ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ ဆက်လက်ပြီး လူငယ်တွေအနေနဲ့ လူတိုင်းနဲ့လိုက်လျောညီထွေဆက်ဆံ ဆောင်ရွက်တတ်မှသာ ဘ၀မှာအောင်မြင်မှုရရှိနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ သတင်းရရှိပါတယ်။
အကြမ်းဖက်မှုပြဿနာအဖြေရှာနိုင်ရန် ရခိုင်လွှတ်တော်အမတ်လေးဦး ယနေ့ သံတွဲမြို့သို့ သွားမည်
လူအသေအပျောက်ရှိခဲ့သည့် သံတွဲမြို့အကြမ်းဖက်ဖြစ်ပွားမှုများနှင့်ပတ်သက်၍ အဖြေရှာဖွေနိုင်ရန်အတွက် ရခိုင်တိုင်းရင်းသားလွှတ်တော်အမတ်လေးဦး ယနေ့ အောက်တိုဘာ ၇ရက်တွင် သံတွဲမြို့သို့သွားရောက်မည်ဖြစ်သည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်မှဒေါက်တာအေးမောင်နှင့်ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ ဦးဘရှိန်၊ဦးထွန်းအောင်ကျော်၊ဦးဖေသန်း စသည့်အမတ် သုံးဦးစုစုပေါင်း အမတ် လေးဦးနှင့်အတူ ပါတီအဖွဲ့ဝင် ၂ဦးလိုက်ပါပြီး သံတွဲမြို့သို့သွားရောက်မည် ဖြစ်သည်။
"ဘယ်လိုလုပ်ပေးနိုင်မလဲဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့ဦးတည်ချက်နဲ့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်" ဟု ၎င်းကဆက်ပြောသည်။
အမတ်လေးဦးသည်ဒေသအခြေအနေကိုစုံစမ်းပြီးနောက် အဖမ်းခံထားရသည့် ၄၄ဦးအနက် ရခိုင်တိုင်ရင်းသား ၃၆ ဦး၏ တစ်အိမ်ခြင်းအလိုက် သွားရောက်စုံစမ်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ဖြစ်ပွားခဲ့သည့်ပဋိပက္ခကြောင့် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူများကိုလည်းဆေးရုံသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှုမည်ဟု ဒေါက်တာအေးမောင်ကပြောသည်။
ထိုသို့ တစ်အိမ်တက်တစ်အိမ်ဆင်း စုံစမ်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းက"ဘာကြော့င်ဖမ်းတာလည်း။၀န်ထမ်းပါသလား။ဘာပုဒ်မနဲ့စွပ်စွဲတာလည်း။ဘာတွေလုပ်ခဲ့လဲ ဒီလိုလုပ်ခဲ့လို့အရေးယူတာလား " တို့ကို သိရှိနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်သွားမည်ဟု ပြောသည်။
"ရက်နာရီအလိုက်မှတ်တမ်းယူပြီးအစိုးရကိုလည်းထောက်ပြမယ်။ လိုအပ်ရင် လွှတ်တော်မှာလည်းတင်ပြမယ်။ ထုတ်ပြန်ချက်လည်း ထုတ်ပြန်မယ်။" ဟု ဒေါက်တာအေးမောင်ကဆက်ပြောသည်။
အကြမ်းဖက်မှုပြဿနာအဖြေရှာရန် လွှတ်တော်၌ခွင့်ယူကာသွားရောက်မည့် ရခိုင်လွှတ်တော်အမတ်လေးဦး၏ ခရီးစဉ်သည် သုံးရက်ခန့်ကြာမည်ဖြစ်သည်။
ဆက်လက်ပြီး ဒေါက်တာအေးမောင်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် သံတွဲအကြမ်းဖက်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ "အစိုးရစွပ်စွဲသလိုဖြစ်သလား။ဘာကြောင့် OIC နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတွေလာမယ်ဆိုတဲ့ကာလမှ ။ မကြာခင် UNရှဲ့လူအခွင့်အရေးကြေညာချက်ကို ကွင်တားနားထုတ်ပြန်မယ်ကာလမတိုင်ခင်လေးမှာမှ ဘာဖြစ်သွားသလဲ။ဦးသိန်းစိန်ပြောတဲ့အတိုင်းတိုက်ဆိုင်တာလား။တမင်တိုက်ဆိုင်အောင်ဘယ်သူလုပ်သလဲ။ဒီဘက်မှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးရွှေမန်းနဲ့ ရခိုင်လူထုနဲ့မြန်မာတပ်မတော်ရဲ့ အငြိမ်းစားခေါင်းဆောင်လက်ရှိပြည်သူလွှတ်တော်ရဲ့ ဥက္ကဌ နာယကကြီးနဲ့ ယုံကြည်မှုကိုတည်ဆောက်နေတဲ့အချိန်ဘာကြောင့်ဖြစ်သွားသလဲ။ဘယ်သူတွေလုပ်သလဲ။ကျွန်တော်တို့အင်မတန်တည်ဆောက်ရတာ။ ငြိမ်းငြိမ်းချမ်းချမ်းနဲ့ရခိုင်လူထုကိုမလိုလားဘူးလား" ဟု မေးခွန်းထုတ် ပြောသည်။